Isikhundla se-Smart MSP-31
Isithuba se-MSP-31 se-Smart Valve Positioner ilawula isidanga sokuvula i-valve ukuphendula kwisiginali yokufaka ye-4 ~ 20mA kumlawuli okanye kwinkqubo yolawulo. Eyakhelwe-ngaphakathi kwi-microprocessor cna ilawula i-valve yokuvula i-degree degree ngokuchanekileyo kwaye iyazi imisebenzi yeseti emiselweyo, ulawulo lwe-PID, unxibelelwano lwe-HART, njl.
Umlawuli weFilter yeMoya ye-MC-22 iDrain yokuDibanisa
Umlawuli wefilthi yokucoca umoya unciphisa uxinzelelo lomoya wokuhambisa isityalo kunye nokubonelela kwibala le-voli okanye izixhobo zolawulo.
Umda Guqula iBhokisi ye-MLS100
U-MLS100 uthintelo lokutshintsha komatshini lufakelwe isicelo sokubonisa i-OPEN / CLOSE isikhundla sevalthi ejikelezayo kunye nokukhutshwa kwe-ON / OFF isophawu lokulawula inkqubo. Ngoyilo olucekeceke kunye oluzinzileyo, lunokulungela ukufaka isicelo kwindawo enobungozi obuphezulu / obuphezulu.
Umda Guqula iBhokisi ye-MLS300
I-MLS300 yokucwangcisa umda isetyenziselwa ukubonisa i-OPEN / CLOSE isikhundla se-valve ejikelezayo zombini kwisiza nakwikude. Ngokusebenza okuqinisekileyo, ilungele indawo enobungozi. Iqokobhe lidibana nomgangatho wokuqhuma-ubungqina kunye nenqanaba le-IP yi-IP67.
Umda wokuTshintsha kweBhokisi ye-MLS300-S
Ukutshintshwa kwemilinganiselo yokunciphisa umda we-MLS kuhambelana nomgangatho woKhuseleko we-IP, umgangatho we-ISO5211 kunye nomgangatho weNamur. Iqokobhe ikakhulu libandakanya uhlobo lwefuthe, uhlobo olusemgangathweni, uhlobo lokubonisa ukuqhuma kunye nohlobo lwentsimbi;
Umda Guqula iBhokisi ye-MLS800
MLS800 / MLS800-S uthintelo lophawu luyasetyenziswa ukubonisa OPEN / CLOSE isikhundla sendawo ye-valve yendawo kunye neyokude. Ibakala le-IP yi-IP67. Uhlobo lokungaqhume-luhlobo noqhaqho-hlobo lukhona.
I-Solenoid Valve ye-MC50 3/2 indlela okanye indlela ye-5/2
I-MC50 Series Solenoid Valve i-MC50 yemveliso yoluhlu zii-solenoid valves ezenziwe yinkampani ye-MORC. Zininzi iindidi zemveliso ukubonelela abasebenzisi ngamathuba ahlukeneyo. Uchungechunge lwe-MC50 ngumqhubi oqhutywa ngepneumatic solenoid valve, ukuze usetyenziswe kulawulo lokutshintsha kwe-pneumatic valve switching.
I-Pneumatic Actuator ye-MAP-Series
I-MAP Series ye-Pneumatic Actuator (Uhlobo lwe-Rack kunye nePinion) I-MAP Series yePneumatic Actuator luhlobo lwejenali ejikelezayo ngetekhnoloji yakutshanje, imilo entle kunye nesakhiwo sekhomputha, esetyenziselwa ikakhulu ukulawulwa kokujikeleza i-angle, njengevali yebhola, ivalve yebhabhathane njalo njalo.
Indawo yokusebenza MeEP-10R
I-MEP-10R Series E / P Positioner MEP-10R's Electric-Pneumatic Positioner ilawula i-valve yokuvula i-degree degree xa iphendula umqondiso wokufakwa kwe-4 ~ 20mA kumlawuli okanye kwinkqubo yolawulo.
Indawo yokusebenza MeEP-10L
MEP-10L Series E / P Positioner MEP-10L Mult-Pneumatic Positioner ukulawula i-valve yokuvula isidanga ukuphendula kwisiginali yokungenisa ye-4 ~ 20mA evela kumlawuli okanye kwinkqubo yolawulo.
Ngokomgangatho we-NAMUR wamazwe aphesheya, ii-vloses solenoid ze-MC50 zingafakelwa ngqo kwi-interface yomthombo womoya wabadlali abasebenza be-single okanye abasebenza kabini bepneumatic.
I-MAQ uthotho lweearhente zombane ziimveliso zokusebenza eziphezulu ezenziwe kwaye zenziwe yinkampani ye-MORC, ekunokubonelela ngesona sisombululo sinamandla kwicandelo lobuzenzele be-valve.